Nweta ozi na Covid-19 na WHO Health Alert na WhatsApp | Akụkọ akụrụngwa
Nweta ozi na Covid-19 na WHO Health Alert na WhatsApp
WhatsApp abụrụla otu ngwa ọzọ iji nweta OMS site na bot ọhụrụ ya. Ọrụ a nke WHO ga-enye ndị niile chọrọ inweta ozi gọọmentị na isiokwu dị iche iche metụtara ọrịa coronavirus ma ọ bụ ọrịa Covid-19. Ọzọkwa bot ga-adị dị n'asụsụ isii niile nke United Nations ma ọ dị naanị na Bekee ugbu a. A na-atụ anya ịgbakwunye Arabic, Chinese, French, Russian na Spanish na izu ndị na-abịanụ.
O nwere ike ịbụ na mgbe anyị na-ede edemede a, asụsụ dị adị ugbu a ma yabụ na anyị niile nwere ike ịchọ ezigbo ozi dị iche na nke dị iche ebe ọ na-abịa site n'aka WHOAnyị agaghị achọta ozi a pụrụ ịdabere na ya karịa nke a na ọrịa a na-efe efe.
1 Ozi bara uru banyere otu esi echebe onwe gị ma ọ bụ chọpụta akụkọ adịgboroja
2 Nke a bụ otú WHO Health Alert bot si arụ ọrụ
Ozi bara uru banyere otu esi echebe onwe gị ma ọ bụ chọpụta akụkọ adịgboroja
O siri ike ịchọpụta akụkọ adịgboroja mana mgbe anyị nwere ozi ziri ezi site na WHO anyị nwere ike ikwenye na ọ bụ eziokwu ozi. Nkọwa maka etu ị ga-esi chebe onwe gị pụọ na ọrịa ahụ, ndụmọdụ maka ndị ga-eme njem ee ma ọ bụ ee, otu esi achọpụta "akụkọ na-adịghị mma" banyere coronavirus na ozi gbasara ofufe gbasara nje ahụ.
N'ụzọ ezi uche dị na nke a ọrụ bụ kpam kpam n'efu ọ na-enyekwa ohere iji obere bot iji nweta ozi gọọmentị. Ọrụ ahụ dị mfe ma onye ọ bụla nwere ike iji ya site na ama ha.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ chekwaa nọmba + 41 79 893 18 92 n'etiti kọntaktị anyị na ozugbo echekwara ziga ozi na okwu "Ndewo" iji malite ịmekọrịta bot. A "bot" bu maka ndi na amaghi igwe nke na-aza onwe ya, obughi ezigbo mmadu mana ihe omuma a bot na-eziga bu ndi mmadu na-achịkwa ya mere na nke a na WHO n'azu ya, ihe omuma a di ezigbo.
Nke a bụ otú WHO Health Alert bot si arụ ọrụ
Ugbu a mgbe anyị na-ede edemede a, ọ na-arụ ọrụ na okwu ahụ "Nnọọ" mana onwere ike ugbua na odi ugbua na okwu a bu Ndewo. Anyị nwere ike dee nọmba nhọrọ ma ọ bụ jiri emoji ma anyị na-ahụ mmeghachi omume ndị a maka omume ndị a:
Nweta onu ogugu ndi mmadu oria na ndi nwuru anwu site na coronavirus
Ihe omuma nile banyere otua esi zere oria nke Covid-19 a, ya na ntu aka iji saa aka anyi ma obu zere ebe ndi mmadu juru
Azịza nye ajụjụ ndị a na-anụkarị site na itinye nọmba ọzọ iji nweta azịza ya
Hofọdụ hoaxes banyere coronavirus, akụkọ ifo ndị mepere emepe wdg na-akọrọ na netwọkụ
Ndụmọdụ maka njem
Akụkọ metụtara Covid-19
Simplezọ dị mfe iji kesaa bot a na ndị kọntaktị anyị
Ebe nrụọrụ weebụ WhatsApp na-enyekwa ozi na WHO na-eduzi Health Alert. Na WhatsApp Coronavirus Ozi Center E nwekwara ozi oge niile banyere mgbanwe nke ọrịa a na ọ bụ otu n'ime ụzọ ndị kasị dịrị nchebe iji soro ozi ahụike ahụike na-adịbeghị anya o doro anya na ikwe ka ekere òkè ozi a.
Onye isi WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na-akọwa na netwọk na teknụzụ na aka dị mma bụ ngwá ọrụ bara ezigbo uru, mana ọ dịkwa mkpa ịnweta ozi a pụrụ ịdabere na ya ma ekwenyeghị na ndị niile anyị na-ahụ bipụtara:
Teknụzụ dijitalụ na-enye anyị ohere pụrụ iche na nke a na-enwetụbeghị ụdị ya maka ozi ahụike niile dị oke mkpa iji kesaa ngwa ngwa na nke ọma, si otú a gbochie ọrịa a ịgbasa ngwa ngwa, na-enyere aka ịchekwa ndụ ma kpuchido ndị kachasị ike na ezigbo ozi ma ghara ịkekọrịta ihe niile ị gụrụ na netwọk ma ọ bụ mgbasa ozi.
Anyị nwere ike ịsị na anyị nọ n'oge ihe isi ike mana anyị niile ga-eme nke kachasị mma, anyị ghọtara na ọ na-esiri ọtụtụ mmadụ ike ịnọ n'ụlọ ugbu a nakwa na obere ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nsogbu n'oge ahụ mana anyị kwesịrị mee ihe ugbu a na ngwa ngwa. Ọ dị mma na ekesara akụkọ na ozi niile ngwa ngwa site na netwọkụ mmekọrịta na ndị ọzọ, mana ị ga-akpachara anya na ihe ị na-akọrọ ugbu a na ndị ọzọ nọ n'ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị ebe nchekwa na ọbụlagodi ndụ ndị mmadụ dabere na ya n'ọtụtụ ọnọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nweta ozi na Covid-19 na WHO Health Alert na WhatsApp
Xiaomi na-enye okpu iji wusi ntutu isi
Valve, HP na Microsoft sonyere ndị agha iji malite iko VR ha